I-Eva Foam, i-Eva Yoga Ivili, ukusika ukusika-iParkway Foam
Xpe Ixabiso lencopho Mat
Iifowuni zeFowuni eziSebenzayo
Uthotho lweeBhanti zeSinqe
Yeyiphi efanelekileyo kumzi mveliso weemoto, ukupakisha ulwelwesi, ukothuka oomatshini kunye namanye amashishini.
I-foam ye-NBR inokulunga kwelangatye kunye neepropathi zokugubungela, ezifanelekileyo kulo naliphi na ishishini onokucinga ngalo.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kumgaqo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, kwimoto, kwimishini nakwimizi-mveliso yokwakha.
Inkampani yethu inenani elikhulu lokuqhubekeka kwe-foam kunye nezixhobo zemveliso. Unokuzithemba kakhulu ekuboneleleni abathengi ngeendlela ezahlukeneyo zesisombululo semveliso yegwebu.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kwezithuthi, ukwakhiwa, ukupakisha, iimpahla zemidlalo kunye namanye amashishini.
Neoprene, ekwabizwa ngokuba yi-CR foam. Yenziwe ngokukodwa ukuba ibe yirabha yesiponji ethambileyo, eguqukayo nenokuphefumla.
UKWENZA ULWAZI, IXABISO NEENKONZO ZENKONZO
Njengomvelisi oqeqeshiweyo okhethekileyo kwimveliso yamashiti amagwebu kunye nokuguqula amagwebu, sineentlobo ngeentlobo zoomatshini bokulungisa amagwebu ukwanelisa iimfuno zabathengi ezivela kumashishini ahlukeneyo. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava emveliso yegwebu, isenza sikwazi ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nenkonzo eyonelisekileyo kubathengi bethu
Parkway Foam Co., Ltd.yasekwa ngo-2001 kwaye ibekwe e Changzhou. Isityalo sigubungela ummandla we-10, 000 yeemitha zesikwere kunye namandla emveliso ngonyaka angama-30, 000 eekyubhiki mitha. Yinkampani egxile kwimveliso yamashiti erabha amagwebu (amagwebu e-EVA, amagwebu e-PE, i-neoprene / i-CR, igwebu le-EPDM) kunye nokuguqulwa kwe-foam (ukugoba, ukusika ukusika, ukusika, ukukrola, njl.
Amava Rich imveliso Izixhobo ezahlukeneyo zokwenza amagwebu Yenza imveliso ngokweemfuno zabathengi Ixabiso elininzi kunye neenkonzo eziluncedo
Amava Rich imveliso
Inkampani yethu inembali yeminyaka eli-16, kwaye ineqela lobuchwephesha elinamava kunye neqela lokuthengisa elinamava
Izixhobo ezahlukeneyo zokwenza amagwebu
Siye saqokelela oomatshini kunye nezixhobo zokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso zegwebu ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi bethu
Yenza imveliso ngokweemfuno zabathengi
Siza kwenza ngokwezifiso iinkonzo kunye neemveliso abazifunayo nganye nganye ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo. Endaweni yokuthengisa iimveliso ezisemgangathweni.
Ixabiso elininzi kunye neenkonzo eziluncedo
Xa kuthelekiswa nabarhwebi kunye nabaphakathi, njengefektri, sinokunika abathengi ngokuthe ngqo amaxabiso afikelelekayo, kodwa kwangaxeshanye, siye saqulunqa ngokukodwa iqela elithelekiswa neenkampani zorhwebo lwangaphandle.
APFE 2020, iBooth No. 6A163
Izahlulo eziZenzekelayo eziBonisiweyo
Asia amagwebu tape mboniso die-ukusika
EMpuma China Rhwebo lwaNgaphandle lwaKhulu ...
Idilesi: Inombolo 115 Caoshangcun Road, Qishuyan Street, Wujin District, Changzhou City Jiangsu kwiPhondo China 213000
© Copyright - 2019-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iingcebiso - Imveliso eshushu - Imephu yendawo
Usonge Camping Mat, Ukubaleka esinqeni Ingxowa, Xpe enamavili Camping Mat, Yangaphandle enamavili Xpe Camping Mat, Ukubaleka Belt Belt, Amanzi abalekayo,